Guddida Joogtada ee Wakiilada Oo Golaha horgeeyay warbixin ay ka diyaariyeen Ha’yado “ | Somaliland.Org
Guddida Joogtada ee Wakiilada Oo Golaha horgeeyay warbixin ay ka diyaariyeen Ha’yado “
September 25, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddida joogtada ah ee Golaha Wakiilada Somaliland ayaa maanta Mudaneyaasha golaha uga waramay waxyaabihii u qabsoomay mudadii goluhu fasaxa ahaa kalfadhigii hore.
Guddoomiyaha Guddida joogtada ee Golaha Wakiilada Md. Maxamed Barkhad Miigane ayaa fadhigii Golaha ka jeediyay warbixin dheer oo u dhignayd sidan:- “Fasaxii Kal-fadhiga 15-aad ee Golaha Wakiilada oo Dastuurka JSL, iyo Xeer-hoosaadka Golaha Wakiiladuba ay waajibinayeen in G/Joogtadu hawlaha Golaha ay waddo muddada fasaxa Goluhu ku kala maqan yahay. Muddadii fasaxa Goluhu ku maqnaa ee hawsha Golaha Guddida Joogtada ay sii waday, waxaan ka xusi karnaa kulamadii ugu muhiimsanaa ee ay guddidu ka qayb gashay:
Kulamada ay Guddidu la yeelatay Hay’adaha Dawladda:-
Guddida Joogtada iyo Anshaxu waxay u yeedhey hay’adaha hoos ku xusan:
Hay’adda Quality Control Commission.
Wasaaradda Macdanta iyo Biyaha.
Wasaaradda Arrimaha Dibedda.
Hadaba, nasiib darro waxa suurto gal noqotay in lala kulmo oo keliya Hay’adda Quality Control Commission-ka iyo SONSAF, iyadoo ay WFP iyo wasaaradaha kor ku xusanba ay ka cudur daarteen la kulanka Guddida Joogtada iyo Anshaxa iyadoo Wasiirada Macdanta iyo Biyaha iyo Wasiirka Arrimaha Dibedduba ay safar kadis ah uga baxeen waddanka, xaga ay Hay’adda WFP ay kulanka ka caga jiidaysay sababo aanay shaacin awgeed. Guddida Joogtada iyo Anshaxa iyadoo gudanaysa waajibaadkooda Dastuuriga ah waxay halkan idinku soo gudbinaysaa warbixinta kulamada ay la yeelatay hay’adaha kor ku xusan si aad xogogaal uga noqotaan wax qabadkooda iyo dhibaatooyinka haysta.
KULANKA GUDDIDA JOOGTADA IYO ANSHAXA IYO HAY’ADDA DhAWAYRISTA TAYADA
Laga bilaabo furitaankeedii rasmiga ahaa ee haya’adda dhawrista tayada bishii Jan 2011, Hay’addu waxa ka hawl galay dhawr arrimood si waafaqsan awoodeeda iyo qorshe hawleedkeeda. Xarunta hay’addu oo ku taal Hargeysa, waxay si fiican ula hawlgashaa xafiiska Goboleedka iyo Goboladda kale kazoo ku saabsan hawlo heerka tayada ee badeecadaha oo dhamaan ay ka soo ifbaxeen walaacyo .
Tayada Cuntada, Dawada iyo Qalabka is Qurxinta
Hawl galkaa ay haya’addu qaaday waxay dhamaan tuseen arrimo aad u mihiim ah oo khatar ku ah quudashada isticmaalka bini’aadamka laga bilaabo bishii January ee sanadkan aynu ku jirno.
Kuwa ugu waawayn hawlaha waxqabadka ee Hayadda Dhawarista Tayada waxaa ka mid ah kuwan hoos ku qoran:
Bishii sanadkan ugu horeysay ee janaayo Hay’addu waxay joojisay (58 Kontaynar) oo mid kasta ay ku jiraan (50 KG) oo wax badan dhaafay taariikhda dhicida ka dib markii ay haya’addu ku qanacday inaanay ku haboonayn quudashada bini’aadamka.
1500 kiish oo sonkor ah oo ay keentay Haya’adda Cuntada Adduunku (WFP) taasoo muunadaha loo diray shaybaadhka (POLUCON) eek u yaal Dalka Kenya si loo baadho, Baadhidaa natiijadeedii waxay muujisay in sonkortaasi in badan oo ma mid ahi aanay ku haboonayn quudashada insaanka.
Busked (PLUMPY NUT) oo ay soo dejisay Haya’adda Cuntada Adduunku (WFP) oo muunidaiisa loo diray shaybaadhka (POLUCON) ee Kenya si loo baadho, natiijada baadhistuna waxay tustay in Cuntadaasi mudo dhaaftay oo dhacday, Sidaasi awgeed Hay’addu waxay diiday in la qaybiyo oo dadweynuhu quutaan.
Misir yaalay keydka Merlin ee ku yaal Xariirad (Awdal) waa la daadiyey oo la baabiyeye ka dib markii muunadihii loo dioray baadhid shaybaadh ay tustayna inaanay ku haboonayn quudashada dadweynaha.
Ugu danbeyntii waxay Hay’addu gubtay Shan iyo Toban Tan( 15 Tan) oo dawooyinka laga soo ururiyey Hargeysa, ka dib markii ay hayaddu u cadaatay inaanay waafaqsanayn xeerarka Tayo wanaaga Dawooyinka ee Caalamiga ah.
Hay’adda Dhawrista Tayadu oo ah hayad Qaran oo u xil saran kuna hawlan sidii ay ummadda reer Somaliland uga badbaadin lahayd halisaha caafimaad ee ay xambaarsan tahay in badan oo ka mid ah badeecadaha wadanka soo gala ee kala duwan, ayaaa sadexdii bilood ee ka bilaabantay bisha April ilaa bisha Juun, waxay gudatay waajibaad qaran oo baaxad weyn leh, qiimo wax ku ool ahna ugu fadhida bulshada ku dhaqan dalkeena S/land.
Haddaba, si aynu u fahano ugana baaraan degno waxyaabihii hayadda u qabsoomay mudada kor ku xusan waxaynu u faahfaahin doonaa qodob qodob.
Marka hore hay’adda Dhawrista Tayadu sadexdii bilood ee u horeeyey sandakna waxay ku hawlanayd dhismaha iyo xafiis goboleedyada.
Xarunta hayada iyo xafiiskeeda Berbera waxay ka wada shaqeeyaan dhamaan Hubinta, baadhida iyo Xakamaynta tayada ee badeecadaha kala duwan ee mudadaasi soo gaadhay dalka.
Laakiinn markaynu hoos ugu sii daadegno arrinta waxqabadka Hay’addu laga bilaabo bisha April ilaa Juun, waxaynu u kala qaadi doonaa sidan hoos ku qoran:
Bishii April 2011, hawl wadeenada Hayadu ee ka hawl gala xafiiska dekada berbara waxay ka daadiyeen oo ay ku gubeen meel fagaare ah 400 oo kiish oo daqiiq ah oo ay lahayd shirkada Indhadeero. Taasoo ku dhacday magaalada Berbera, ujeedada ugu waynina ahayd badbaadinta shacabka Somaliland iyo sugidaa tayada badeecadaha la quuto ee ka soo dega dekadaha iyo kastamada dalka.
Bishii May 2011, waxay hayadu lagu wareejiyey 1000 kiish oo daqiiq ah oo lahaa ganacsadaha Maweel ka dib markii ay hawlwadeenada Saaxil ay ku qanceen inay halis ku tahay bulshada dalka ku dhaqan.
Isla Bishii may 2011, shir ay yeesheen Guddida hay’adu waxay arrinsadeen kuna lafa gureen badeecadaha raashinka eek u kaydsan bakhaaradda ay maamusho Hayada WFP ee Berbera, Gobolka Saaxil, taasoo ahayd Sonkor iyo Rusf.
Isla bishii May 2011, ka dib kulan ay wada yeesheen guddida hayada iyo madaxda hay’adda WFP, waxaa la isla meel dhigay in dib loogu raro dalka jabuuti si loo burburiyo, taasoo lagu guulaystay, laakiin ay maqan tahay shahaadadii burburinta badeecadaha Sonkorta ahayd iyadoo go’aankaa ay gaadheen afar(4) wasiir iyo gudoomiyaha hayada shuruudna lagu xidhay WFP inay ka keenaan warqad ogolaansho ah dalka Djabouti.
Guusha wax ku oolka ah ee hayadu ku faani karto waxaa uu noqday in Bish June 1-deedii ay shaqaaleheedu u bilaawday tababar ku saabsan sida loo baadhayo Cuntada, Dawada iyo agabka kale ee ka soo dega dekadaha ama kastamada, , tababarkaa waxaa hayadu gacan ka siiyey hayada CARE INTERNATIONAL, waxaanu tababarkaasi ka socda xarunta Hayadda Dhawrida Tayada.
Bishii June , 2011 Hayada Dhawridu Tayadu waxay ku guulaystay in ay laba xafiis ka furto labada madaar ee Hargeisa iyo Berbera oo
Previous PostMadaxtooyada Somaliland Oo Beenisay in la lunsaday raashin deeq ah oo dalka la keenayNext PostTaliska Ciidamada Qaranka Iyo Asluubta Oo Qado Sharaf Ku Qaabilay Moh Farah	Blog